Amalungu anyuliwe kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama
Ngoko umntu kufuneka ayenze ntoni ukuze athole induction kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama? Yiyiphi imigaqo, iimfuno, zokufumana ingqalelo? Ziziphi na iindidi apho i-golfer okanye omnye umntu obandakanyekayo kwi-golane ingenza ubulungu?
Makhe sijonge kwiindidi zobulungu beHolo, iindlela zokutyunjwa kunye nendlela amalungu amitsha akhethwe ngayo.
Iimpawu zobulungu beWGHOF kunye neemfuneko zokufaneleka
IHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama leNkcubeko inezindidi ezine apho umntu angatyunjwa okanye akhethwe:
Abaqhubi beMadoda: Abagadi begolfu abafana bayakufanelekela ukuba baqwalaselwe ukuba bafumana iinqwelo ezili-15 ezihambayo phakathi kwePGA Tour, i-European Tour, iJapan i-Tour ye-Golf, i-Sunshine Tour, i-Asia Tour kunye ne-PGA yase-Australasia; okanye ubuncinane iimbini ezimbini kwi-majors (i -Masters , i- US Open , i- British Open , i- PGA Championship ) okanye i -Players Championship . Abadlali beGoli kufuneka babe neminyaka engama-50 ubudala, okanye bathathe umhlala-phantsi kwi-golfo lokukhuphisana ubuncinane kwiminyaka emihlanu.
Abaqhubi beBafazi: Abagadi beegulane abafazi banelungelo lokufumana ubuncinci beli-15 phakathi kweendwendwe ezibonga amanqaku apheleleyo ehlabathini (LPGA, Ladies European Tour, Japan LPGA, Korea LPGA kunye ne-Australia Ladies Golf Golf); okanye ubuncinci amawonga amabini kwimidlalo enkulu (i- US Women's Open , i- LPGA Championship , i-Mauret Classic 1979-2000, iBritish yaseBritan Open Open- 2001, i- Kraft Nabisco Championship 1983-yangoku kunye ne -Evian Championship 2013-yangoku). Abadlali beGoli kufuneka babe neminyaka engama-50 ubudala, okanye bathathe umhlala-phantsi kwi-golfo lokukhuphisana ubuncinane kwiminyaka emihlanu.
Amanqanaba omkhosi: Abadlali begulane kunye nabaqeqeshi begalufu abanomsebenzi wabo owenzeka ngaphambili phambi kowe-1975 bafanelekile. Akukho ncinci yokuwina iphelele; umntu makanyulwe ilungu leKomidi eliKhethekileyo.
Icandelo lokuPhucula iNkqubela yokuBomi: Nabani na othathwa njengegalelo elikhulu kwigalufa ngezinye iindlela ngaphandle komdlali (umzekelo, ukuphathwa, abeendaba, ukuyila ikhosi, izixhobo ezintsha, njl.) Zifanelekile. Umntu makanyulwe ilungu leKomidi-phantsi kweKomiti.
Ukuvota yi-Sub-Committee yeKhetho
Xa umdlali okanye ukufaneleka komntu ukuqinisekiswa, umntu lowo ukonyulwa njani? Isinyathelo sokuqala sinokuKomiti ephantsi kweKhetho, ikomidi lomntu eli-20 elibandakanya:
7 "izihlalo zeziko" - abameli be-World Golf Foundation Board (i-PGA Tour, i-European Tour, i-LPGA Tour, i-PGA yaseMelika, i-USGA, i-R & A, i-Masters).
Izihlalo ezi-13 ezikhulu-ezi ziquka amalungu e-World Golf Hall of Fame, kunye nabameli ababini be-International Federation ye-PGA Tours, amalungu amathathu abeendaba kunye nabanye abantu ababini.
I-Sub-Komiti yoKhetho idibana nokuhlaziywa uluhlu lwabagadi begolfu abahlangabezana neemfuno zokufaneleka ezikwinqanaba lokuncintisana kwabamadoda nabasetyhini; kunye nokuphonononga nawuphi na otyunjelwayo kwiiNtshatsheli zoLuntu kunye neCandelo loPhuculo lweeNkcazo. Zonke iindawo ezihlala kwiHolo leLifa leNkcazo zihlolisiswa ngeengcebiso zabo, kwaye ikomiti ijonga iziphumo zaloo ballo.
(I-golfer evumelekileyo engaphumeleli ukufumana ivoti kuyo nayiphi na ilungu lekomiti elingaphantsi eliyiminyaka elibini elikhutshwayo lisuswa kwixubusho elizayo.)
Emva kokuhlaziywa kwalo, iKomidi eliSekhethi yoKhetho likhetha abagqibeleleyo abahlanu kwiintlobo zokhuphiswano lwababesilisa nabasetyhini, kunye neenkomfa ezintathu zokugqibela kumabutho aseMagqabini kunye nakwiindidi zeeMpilo.
Abo bagqityiweyo baya kudluliselwa kwi ...
IKomishoni yoKhetho yikomidi lomntu eli-16 elibandakanya:
Izihlalo ezingama-4 - ezi zeMigangatho yeHlabathi yeHlabathi yeGrama, kwaye isebenza ngeminyaka emi-2.
9 "izihlalo zesikhungo" - ezi zahlula phakathi kweBhodi yeBlabathi yeBhola yeGalati (iiNtloko zePGA Tour, i-European Tour, iLPGA Tour, i-USGA, i-R & A, i-PGA ye-America kunye ne-Masters) kunye namalungu amabini abeendaba (iinkokeli Umbutho wamazwe ngamazwe oBhali beGalofu kunye noMbutho wabalobi beGolati eMelika).
Izihlalo ezi-3 ezinkulu-abantu, kuquka i-International Federation yabameli be-PGA Tours, abakhonza iminyaka emi-2.
Amalungu angama-16 eKhomishoni yoKhetho afumana uluhlu lweekomiti eziphantsi kweqela lokugqibela, kwaye bavote kwi-finalistist nganye.
Umgcini wokugqibela kufuneka afumane imvume evela kumaphesenti angama-75 eKomishoni yokuKhetha (ubuncinane ubunamalungu angama-12 kumalungu angama-16) ukuzuza induction.
Ubuninzi babantu ababini banokukhishwa kwinqanaba elinikeziweyo kunyaka omnye; kwaye ubuninzi bezinto ezintlanu ziyakwazi ukuchithwa kunyaka ngamnye.
Inkqubo yokuqulunqwa yenzeke njalo ngonyaka.
Ngubani owaqala? Ngaba Kwakuyi-Tiger Woods?
Iprofayili kaNick Faldo
Iimeko eziphambili zokuThabatheliswa kwabantu abasemzini
Indlela yokufunda I-Lot ye-Dry Text ngokukhawuleza
Fumana Amaqiniso Okumnandi Nge-Christian LeBlanc
I-Tantric Master View of Tantra
Bossa Nova: Ukususela kwiMvelaphi yayo kubaMculo namhlanje
Izinto ezi-5 i-Psychic ezilungileyo aziyi kuphinda zixelele